Carnegie: Nyanzvi bhodhi mutambo nezve yakakurumbira simbi tycoon - Game poindi - Bhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | May 4, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, nhau
Mukutanga kwa2021, Xavier Georges 'nyanzvi yemutambo Carnegie yakapihwa mari neQuined Games kuburikidza nechaunga chemari Kickstarter. Pegasus Spiele parizvino iri kuvhura shanduro yemitauro miviri yekutengesa ine mirairo muchiGerman neChirungu.
Nemupiro wevanopfuura zviuru zvitanhatu vatsigiri, chirongwa cheCarnegie game chakaitwa paKickstarter. Pamusoro pazvose, mutambo uyu wakavepo kune hupenyu hwaAndrew Carnegie, akaberekerwa kuScotland muna 6.000 uye akatamira kuUnited States of America nevabereki vake muna 1835.
Carnegie: muzvinabhizimisi, mubatsiri uye philanthropist
Andrew Carnegie akatanga basa rake muhofisi yeteregirafu, asi basa rake guru mukuvaka indasitiri yesimbi yekuAmerica rakamuita mumwe wevarume vakapfuma kwazvo pasi rose uye mwana weposter weAmerican Dream.
Asi Carnegie aivewo mubatsiri uye philanthropist. Parufu rwake muna 1919, akapa inopfuura mamiriyoni $350 epfuma yake kunheyo dzakasiyana-siyana, neimwe mamiriyoni 30 emadhora ichienda kumasangano anoyamura. Zvipo zvake zvakatsigira kuvakwa kweanopfuura zviuru zviviri nemazana mashanu emaraibhurari everuzhinji emahara achiri kutumidzwa nezita rake: Carnegie Libraries.
Iyo nyanzvi yemutambo Carnegie, yakavakirwa pahupenyu hwesimbi tycoon, inopa vatambi mukana wekutevera tsoka dzake mumakwikwi ehurongwa. Kuti vabudirire, vatambi vanofanirwa kuwedzera bhizinesi ravo nekuwedzera madhipatimendi matsva uye nekushandisa zvine hungwaru vashandi vavo. Rimwe nerimwe remadhipatimendi ekambani rinoenderana neimwe yemhando ina dzezviito zvemutambo: Human Resources, Administration, Engineering, uye Research & Development. Pakutanga kwemutambo, munhu wese anotanga nehurongwa hwebhizimisi hwakafanana, asi hunoshanduka sezvo mutambo unofambira mberi. Munguva yemutambo, vatambi vanotora vashandi vatsva uye vanoita mari mukutengesa zvivakwa nekugadzira zvinhu, gadzira matekinoroji ekufambisa, uye kuwedzera network yekufambisa muUnited States. Uye pamwe ivo vanozove vane mukurumbira nekuda kwerupo rwavo kune zvakanaka zvenyika yavo, nekuti vanogona kushandisa purofiti yavo kune akasiyana mapurojekiti emagariro.
Mutambo uyu unotora raundi makumi maviri chaiwo, umo mutambi wega wega anotora nguva. Kutenderera kwega kwega, munhu anoshanda anosarudza chimwe chezviito zvina, izvo vamwe vatambi vanogona kuzotevera. Kubudirira kwezviitwa zvavo kunoyerwa nemapoinzi ekukunda anowanikwa. Iye munhu ane mapoinzi akawanda ekukunda pakupera kwemutambo anohwina uye anozoyeukwa nekusingaperi nekuda kwezviito zvake kune avo vakavapoteredza. Carnegie inyanzvi yehungwaru mutambo une nzira dzakabatana dzemutambi mumwe kusvika vana vane makore gumi nemaviri uye kupfuura uye unotora pakati pe20 ne12 maminetsi pamutambo. Mutambo uyu wave kuwanikwa muzvitoro kubva mwedzi uno.
Pegasus Mitambo 57007G Mitambo Yebhodhi * Parizvino hapana ongororo 49,99 EUR tenga
Kare Wildcat Pfuti Machine: Shooter - zvakare nekatsi
Inotevera Nhume Yakasviba: Nyowani RPG ine co-op modhi
Dragon Ball Z board game inooneka - asi kwete yemusika wekumadokero
WWE SuperCard: Mwaka wechisere unounza zvitsva zvemukati
Smart Android: Iyo Talos Nheyo yave kuwanikwa zvakare yeNintendo Chinja
Ongororo yeBhuku: Batman: Nyika yeRima Knight